Guddi Aqalka Sare oo isku dayaya muujinta in aysan weli ku milmin Xukuumadda – Radio Daljir
Seteembar 12, 2018 2:20 g 0
Guddiga Joogtada ee Xildhibaanada Aqalka Sare ayaa kulan ay maanta ku yeesheen Magaalada Muqdisho waxa ay ku sheegeen in ay guddi u diri doonaan xarumaha maamul goboleedyadda. Guddigaan ayaa loogu talagalay in ay ka soo talabixiyaan cabashadda dowladda dhexe ay ka muujiyeen maamul goboleedyadu iyo wadashaqeyn xumada ka dhextaagan dowladda dhexe (DFS) iyo maamul goboleedyada.
Kulanka kaddib, Golaha Aqalka Sare ayaa ugu baaqay madaxda maamulada in ay joojiyaan abaabulka siyaasadeed ee ay ka wadaan iyo mooshinada la abaabulayo.
Golaha Aqalka Sare waxa ay sheegeen in ay gudan doonaan waajibka dastuuriga ah ee ka saaran maamul goboleedyada, islamarkaana ay dadaal badan u gali doonaan sidii xal looga gaari lahaa kala fogaanshaha hoggaanka Madaxweyne Farmaajo iyo hoggaanka maamulada dalka.
Khilaafka hoggaanka madaxweyne Farmaajo iyo tuhunka sii xoogeysanaya ee ah in Madaxweyne Farmaajo uu ka horyimid dastuurkii dalka iyo nidaamka federaalka ayaa sababay in hoggaanka maamulada dalku ay ku dhawaaqeen hakinta xiriirka ka dhaxeeya DFS iyo maamul goboleedyada.
Marka laga reebo dhaqdhaqaaqa kooban ee xubnaha Aqalka Sare, waxaa hadda si toos ah u soo shaacbaxaya in maamulada goboladu ay yihiin laanta kaliya ee maanta hubin la dabataagan hoggaanka Madaxweyne Farmaajo iyo Laanta Fulinta ee DFS.
Hoggaanka maamulada dalka ayaa si bareero ah u tilmaamay in ay hadda isku milmeen saddexdii laamood ee DFS oo la rabay in mid walbaa uu hubiyo hoggaanka iyo siyaasadda tan kale, ayaga oo si toos ah farta ugu fiiqay isku milanka xukuumadda Madaxweyne Farmaajo iyo Baarlamaanka ama laanta fulinta dalka iyo tan sharci-dajinta.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 478 Wararka 20404